🥇 ▷ Microsoft waxay xaqiijineysaa in Windows 10 lagu rakibi karo / lagu soo celin karo iyadoo la isticmaalayo Cloud ✅
Microsoft waxay xaqiijineysaa in Windows 10 lagu rakibi karo / lagu soo celin karo iyadoo la isticmaalayo Cloud
Microsoft ayaa sii daayay cusbooneysiinta Windows 10 20H1 Dhisi 18950 loogu talagalay ‘Gudahars’. Inta ugu badan ee ay ka kooban tahay waa mid caajis badan mana u qalmo tixgelinkeena, laakiin waxaa jira wax runtii soo jiidata xiisaha, oo ku hoos dhaca magaca ‘Daruur daruuriga‘(Soo dejiso daruuriga). Magacaas aasaasiga waxaa loo dejiyay si loogu oggolaado dib-u-soo-celinta iyo soo-celinta nidaamyada ku saleysan Windows 10 daruuraha halkii la ciyaari lahaa waxay u baahan yihiin barnaamijka softiweerka jirka sida pendrive ama DVD.
“Gudaha waxay ogaan karaan tixraacyo” Cloud Download “oo laxiriira dib u soo celinta ama cusboonaysiinta kombuyutarka. Shaqadan wali lama heli karo. Microsoft ayaa ku qoreysa ogeysiiska cusboonaysiinta.
Isticmaalayaasha MacOS way ogaan doonaan sida saxda ah ee ay astaantani u shaqeyso, maadaama ay muddo dheer ka jirtay qalabkii tufaaxa qaniinyada, waxayna umuuqataa in ‘Cloud Download’ ay si isku mid ah uga shaqeyn doonto Windows 10, taasoo u oggolaanaysa dadka isticmaala Si otomaatig ah u rakibi nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka oo laga heli karo Cloud.
Dib-u-soo-celinta dhaqameed ee OS waxay kuxiran tahay abuurista qayb ka soo kabashada kujira HDD / SSD ama soo mara taageero kale oo jidheed oo dibadeed sida pendrive, iyo Windows Waad u adeegsan kartaa qaybtan si aad u keydiso faylasha iyo faylasha muhiimka ah ee dib loo soo celiyo markii dib loo furayo nidaamka hawlgalka. Marka dib loo soo celiyo Cloud, Microsoft waxay si sahal ah ugaga soo saari lahayd macluumaadka daruuriga tooska internetka.
MacOS-ka, adeegsadayaashu waxay leeyihiin saddex ikhtiyaar: rakib daruur ah nooca ugu dambeeyay ee macOS; dib-u-rakibida daruuriga ah nooca ‘OSOS’ asalka ah ee horay u sii rakibay iibinta qalabka; dib-u-soo-nooleyn maxalli ah oo ku jirta disk-ka soo-kabashada ku-dhistay. Hadda ikhtiyaarrada la midka ah ee Windows 10 weligood wax yeeli maayaan loogu talo galay adeegsadayaasha aan khibrada u laheyn waxayna xitaa ka caawin laheyd badbaadinta khabiirada waqtiga.
iyada oo loo marayo: Doodaha Ciyaarta